अर्थ Archives - Page 264 of 268 - Janakhabar
स्वरोजगार कोषको रकम वितरण स्थगन
काठमाडौं , युवा स्वरोजगार कोषको रकम ‘चरम दुरुपयोग’ स्विकार्दै सरकारले गरेको छ । पारदर्शी र व्यवस्थित कार्यविधि तयार नहुन्जेल कोषको ऋण प्रवाह रोक्न अर्थ मन्त्रालयले कोषलाई निर्देशन दिएको छ। स्वरोजगार कोषले यसै साता दोस्रो किस्ताबापत ६० करोड रुपैयाँ विभिन्न सहकारीलाई दिँदै थियो । अर्थले कोषलाई अर्को व्यवस्था नहुन्जेल भुक्तानी नगर्न भनेको छ । ‘तत्काललाई कार्यक्रम […]
२०७० जेष्ठ १० गते, शुक्रबार
सुरूङमार्गलाई निर्माण अनुमति
काठमाडौ । करिब ३४ अर्ब लगानीमा निर्माण हुन लागेको काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौडा सुरूङमार्ग परियोजनाले निर्माण अनुमती पाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपीबीसीएल) लाई निर्माण अुनमती दिइएको हो ।’पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा संचालनकालागि निजी लगानी सम्वन्धि नेपाल सरकारको ऐन अनुसार जेठ ६ गतेको मन्त्रीस्तरिय निर्णयले परियोजना संचालन गर्ने अनुमती दिएको […]
२०७० जेष्ठ ८ गते, बुधबार
स्वरोजगार कोषमा भ्रष्टहरूको जगजगी
काठमाडौँ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष यतिबेला भ्रष्टहरूको लुटको थलो बनेको स्रोतले बताएको छ । स्वरोजगार कोषमा चरम् आर्थिक अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनले पनि प्रस्ट पारिसकेको छ । स्वरोजगार कोषमा यसरी चरम् अनियमितता हुनुमा कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोदकुमार गुरागाईंको कार्यशैली नै प्रमुख कारक भएको स्रोतको दाबी छ । कार्यकारी निर्देशक विनोदकुमार गुरागाईंकै कार्य […]
२०७० जेष्ठ ४ गते, शनिबार
औद्योगिक कोरिडर बन्द-हड्ताल मुक्त
काठमाडौँ । पर्सा-बारा औद्योगिक करिडोरलाई बन्द हडताल मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । मंगलबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायी र ट्रेड युनियनले उक्त प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । वीरगन्ज एवं बारा उद्योग वाणिज्य संघ र विभिन्न ट्रेड युनियनले संयुक्त हस्ताक्षर गरी १९ बुँदे लिखित साझा प्रतिबद्धता गर्दै बन्द हडताल मुक्त घोषणा गरेका हुन् । वीरगन्ज […]
आँखुखोलाको विजुली जेठ १५ देखि
काठमाडौँ । यही जेठ १५ गतेदेखि धादिङको आँखुखोला जलविद्युत आयोजनाबाट नियमित विद्युत् उत्पादनको तयारी भएको छ । ८.४ मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको निर्माण पक्षले जानकारी दिएको छ । अबको केही दिनमै विद्युत् उत्पादन शुरु गरिने आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक विश्वनाथ कँडेलले जानकारी दिए । जेठ १५ गतेभित्र नियमित उत्पादन शुरु […]
स्वरोजगार कोषमा विनोदको मनोविनोद
काठमाडौँ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोदकुमार गुरागाईंको क्रीडास्थलमा परिणत भएको स्रोतले बताएको छ । अहिले युवा स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोदकुमार गुरागाईंको मनोविनोद गर्ने थलोको रूपमा विकास भएको सम्बद्ध कर्मचारीहरूले नै गुनासो गर्न थालेको स्रोतले बताएको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक गुरागाईंकै अक्षमताका कारण कोष धराशयी हुन लागेको स्रोतले […]
२०७० बैशाख २८ गते, शनिबार
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी बर्ढाईने
काठमाडौँ । अहिलेकै पुँजी आधारमा संस्था बलियो हुन नसक्ने र लगानी विस्तारमा पनि समस्या आउने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने भएको छ । ‘बैंकहरूले पुँजीको आधार बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दीगोपनाका लागि अहिलेको पुँजीको ५ गुणासम्म वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता […]
सुख्खा बन्दरगाह निर्माण सुरु
काठमाडौ , । बाँके जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र एवम् परिवहन स्थल (सुख्खा बन्दरगाह) निर्माण प्रक्रियाअघि बढाइएको छ । नेपाल–भारतबीच भएको सम्झौताअनुसार नौ वर्षअघि भएको सो सम्झौता अनुरूप अहिले बन्दरगाह निर्माणका लागि सो क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण गरी रेखाङ्कनको काम सुरु गरिएको छ । बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार, जिल्लाको नेपालगन्ज भन्सारको पश्चिम जयसपुर र […]
२०७० बैशाख २४ गते, मंगलवार
स्वरोजागर कोषमा गुरागाईको रजाई
काठमाडौँ । सरकारले युवा तथा साना व्यवसायीलाई स्वरोजगारमा लाग्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका सत्य स्थापना गरेको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष यतिबेला कोषका कार्यकारी प्रमुख विनोद गुरागाईको रजाई गर्ने थलोको रुपमा परिणत हुन पुगेको स्रोतले बताएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट सेवा निवृत्त विनोदकुमार गुरागाई एमाओवादीका एक नेता फेर समातेर कोषको कार्यकारी निर्देशक बन्न सफल […]
२०७० बैशाख २१ गते, शनिबार
विश्व बैंकद्वारा छ अर्ब सहयोग
काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी दर्ुइवटा परियोजना कार्यान्वयन गर्नेविश्व बैंकले रु. छ अर्ब ६९ करोड ६० लाख उपलब्ध गराउने भएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने जोखिम कम गर्न उक्त बैंकले रु. दर्ुइ अर्ब ६७ करोड ८० लाख र नेपाल कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु. चार अर्ब १८ करोड […]